कमोडिटी बजार, जहाँ सुनदेखि अन्डासम्ममा सौदाबाजी गरिन्छ - आयो खबर
कमोडिटी बजार, जहाँ सुनदेखि अन्डासम्ममा सौदाबाजी गरिन्छ
२०७४ भाद्र २ प्रकाशित १२:५१
२८ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले हालै कमोडिटी बजार (बस्तु विनिमय बजार) सम्बन्धि ऐन २०७३) पारित गरेको छ । तर अझै पनि कमोडिटी बजार के हो र नेपालमा कसरी कारोबार भइरहेको छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन ।
कमोडिटी बजार भनेको सामान्यतया विभिन्न भौतिक बस्तुहरुको अन्तर्राष्टिय मूल्यलाई आधार मानेर लिलाम बढाबढमा सम्झौतापत्रको कारोबार गर्ने प्रणाली हो । भौतिक वस्तुहरुमा कृषि उपज, सुन, चाँदी, फलाम लगायत पर्दछन् । यसमा कारोबारको राफसाफ मुख्यतया दुई प्रक्रियाले हुन्छ । कारोबार गरिरहेको वस्तु निश्चित अवधिपछि भौतिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी वा नगदमा मात्रै राफसाफ गर्ने व्यवस्था हुन्छ । यो सेयर बजारभन्दा जोखिमयुक्त त रहेको छ नै, बुझ्न जटिल पनि छ ।के हो कमोडिटी बजार ?
कतिपय देशमा अहिले मौसम पुर्वानुमान सूचकलाई पनि कमोडिटी बजारको रुपमा हेर्न थालिएको बजार सरोकारवालाहरु बताउँछन् । बजार सुचकहरुको पुर्वानुमानको आधारमा पनि यहाँ कारोबार हुने गर्छ ।
हाल नेपालमा तीन एक्सचेन्ज सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैमध्येको एक मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स) मा हुने कारोबार प्रणालीको आधारमा कमोडिटी बजार’bout यहाँ बुझाउन खोजिएको छ ।
कसरी हुन्छ त कारोबार ?
कमोडिटी बजारमा मुख्यतया चार किसिमका प्रोडक्टहरु प्रचलनमा छन्, फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन र स्वाप । नेपालमा मुख्य रुपमा फ्युचर्स कारोबार बढि प्रचलनमा रहेको छ । यस्तो कारोबारको लागि जुन वस्तुको कारोबार गर्ने हो त्यसको पहिले मूल्य तय गरिन्छ ।
सुन, चाँदी, फलाम, अन्न लगायतका बस्तुहरुको आधिकारिक मूल्य निर्धारण गर्दा यस्ता एक्सचेन्जहरुले विश्व बजारमा चलेको मूल्यलाई आधार मान्छन् । विश्व बजारमा हरेक दिन लाखौं/करोडौं पटक यस्ता वस्तुको कारोबार हुन्छ । धेरै एक्सचेन्जले ब्लुमबर्ग, सिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेन्जबाट मूल्य (तथ्यांक किनेर) लिने गर्छन् ।
कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताले ती कम्पनीको वेवसाइटमा आउने मूल्य र एक्सचेन्जले आधार मानिरहेको मूल्यमा फरक परेको गुनासो गर्छन् । यस्तो हुनुको एउटा कारण के हो भने एक्सचेन्जले पैसा तिरेर सदस्य बनेर यस्तो मूल्य सुचना लिएको हुन्छ । ती सुचना तत्काल बजारमा (रियल टाइम) जुन दरमा चलेको छ त्यही दरमा आधारित हुन्छ । तर सबैले निशुल्क प्राप्त गर्ने सुचना भने १० देखि ३०/४० सेकेण्डसम्मको फरकमा अध्यावधिक भइरहेको हुन्छ । त्यसो त लगानीकर्ताले पनि पैसा तिरेर रियल टाइममा आधारित मूल्य तथ्यांक लिन सक्छन् ।
‘बजारमा लाखौं/करोडौं पटक कारोबार हुने भएकोले एकै छिनमा बजार नयाँ मूल्य निर्धारण भइसकेको हुनसक्छ,’ मेक्सका डेपुटी महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता नरेन्द्र भट्ट भन्छन् ।
यसअघि कम्पनीहरुले आफ्नो सफ्टवेयर बिगारेर मूल्य दरमा चलखेल गर्ने गरेको पनि नपाइएको भने होइन । तर अब धितोपत्र बोर्डको नियमनको दायरामा आएकोले वस्तुबजारमा चलखेल हुने सम्भावना कम रहने विश्वास गरिएकाे छ । स्थानिय एक्सचेञ्चमा यस्तो मूल्य बजार निर्माताले तय गर्छन् । बजार निर्माता भनेका ब्रोकर कम्पनी वा क्लियरिङ हाउसहरु हुन् । उदाहरणका लागि सुनको मूल्यको कुरा गर्दा विदेशी बजारमा कायम भएको मूल्यको आधारमा नेपाली मूल्य तय गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि बजार निर्माताले अधिकतम १२ रुपैयाँ ५० पैसासम्म थप गरेर मूल्य तय गर्न पाउँछ ।
मानौं, बजार निर्माताले प्रति १० ग्राम सुनको कारोबार मूल्य १ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेर बिक्रीको लागि राख्यो (मूल्य कोट गर्यो) । किन्ने साधारण ग्राहकले पनि १ हजार २ सय रुपैयाँमा किन्न चाह्यो भने त्यो कारोबार सम्पन्न (म्याचिङ) हुन्छ । तर, ग्राहकले त्यो सुनको मूल्य १ हजार १ सय ५० मा आए मात्र किन्ने बताएमा त्यो कारोबार सम्पन्न हुँदैन । त्यो दर प्रस्ताव नआउँदासम्म आदेश कायम रहिरहन्छ । यसरी ग्राहकले दिएको आदेश पनि निश्चित अवधिसम्मको हुन्छ । ग्राहकले रोजेमा यो एक दिन, वा नजिकको शुक्रवार (गुड टिल फ्राइडे) वा कारोबारमा करारको अवधि रहँदासम्म हुन्छ ।
कारोबार गर्ने बजार निर्माता भने एक मात्र हुँदैनन् । एकभन्दा बढिले कारोबारमा सहभागिता जनाउछन् । बजार निर्माताले किन्ने र बेच्ने दुवै काम गर्न सक्छन् ।
भौतिक भुक्तानी हुने कारोबार (स्पट कारोबार)
मेक्सकै उदाहरण लिँदा कम्पनीले सुन र चाँदीको भौतिक सामानको भुक्तानी कारोबार गर्छ । यसमा ग्राहकले किन्ने काम मात्र गर्न पाउँछन् । यस्तो कारोबार भएको तीन दिन भित्रमा ग्राहकले किनेको सामान प्राप्त गर्छ । यस्तो बस्तुको भुक्तानीको सुनिश्चितता दिने गरी डेलिभरी भेण्डर कम्पनीले एक्सचेन्जसँग सम्झौता नै गरेको हुन्छ । हाल मेक्समा हुने सुन, चाँदीको कारोबारमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, आनन्द ज्वेलर्स, ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सलगायतले डेलिभरी भेन्डर्सको काम गरिरहेका छन् ।
एक्सचेन्जमार्फत किनेको सुन ग्राहकले चाहेमा ज्वेलर्स भण्डारमा भने बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी ग्राहकले बिक्री गरेको सुनको मूल्य भने एक्सचेन्जमा कायम हुने बजार मूल्यभन्दा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायीले तोकेको मूल्य नै आधार मानिन्छ ।
अण्डाको लागि भने विदेशी एक्सचेन्जमा भएको कारोबारको मूल्य लिने गरिएको हुदैन् ।
नगदमा भुक्तानी गरिने कारोबार
मेक्सले फ्युचर्स कारोबारमा भौतिक बस्तुको भुक्तानी कारोबार गर्ने गरेको छैन । मात्रै मूल्यलाई आधार मानेर बनेको सम्झौता पत्रको कारोबार गरिरहने हो । मेक्सले नगद कारोबार गर्ने तरिका दुई ओटा दिएको छ । सर्ट टर्म (अल्पकालिन) र लङ टर्म (दिर्घकालिन) ।
मानौं, तपाई १ लाख रुपैयाँ लिएर बजारमा कारोबारको लागि जानुभयो । यो सुनको कारोबारभन्दा पनि सुनको मूल्य निश्चित अवधिमा यति पुग्न सक्छ भन्ने आधारमा हुने सम्झौता पत्रको कारोबार हो । मानौं, आगामी नोभेम्बरमा सुनको मूल्य कुनै तहमा पुग्छ भन्ने अनुमानमा सम्झौता पत्र बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै यस्तो सम्झौता तयार भएको हुन्छ ।
त्यो सम्झौता अनुसार किनबेच गर्न चाहनु भयो भने तपाईले १ केजी सुनको धरौटी मूल्य ८६ हजार एक्सचेन्जमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी धरौटी बुझाउदा धरौटीभन्दा केही बढि रकम राख्नै पर्ने हुन्छ । मानौं तपाईले १ लाख रुपैयाँ बुझाउनु भएको छ ।
अब तपाईले कारोबार गर्ने भनेको १० ग्राम सुनको मूल्यको आधारमा हो । १० ग्राम सुनको मूल्य ३५ हजार ८ सय ८० हुन आयो ।
अल्पकालिन तरिकाको कारोबार गर्न चाहनु भयो भने तपाईले पहिले बिक्री आदेश दिनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको यो सम्झौता पत्र यतिसम्ममा अहिले बिक्री हुन सक्छ भन्ने आधारमा तपाईले मूल्य तय गरेर आदेश दिनु हुन्छ । तपाईले दिएको आदेशमा बिक्री हुन्छ भने त्यो सम्झौता पत्रको अवधि नसकिदा (माथीको उदाहरण अनुसार नोभेम्बर) सम्म तपाईले एकपटक कम्तिमा त्यो पुनः खरिद गर्नैपर्ने हुन्छ । तपाईले खरिद गर्नु भएन भने पनि अवधि समाप्तिमा तपाईले त्यो खरिद गरिएको मानिनेछ । अवधि समाप्तिमा तपाईले बिक्री गरेको मूल्यभन्दा बढि मूल्य बजारमा कायम भएको अवस्थामा तपाईले थप पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कम मूल्य कायम भएमा तपाईले मूल्य अन्तरबाट भएको फाइदा पाउनु हुन्छ ।
तपाईले बिक्री गरेकोभन्दा बढि मूल्य पुगेपछि धरौटी सहित राख्नु भएको १ लाख रुपैयाँले समेत नखाम्ने अवस्था देखिने वित्तीकै एक्सचेन्जले हरेक रात १२ बजेपछि तपाईलाई पैसा थप्न मार्जिन कल गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रातमा समेत कारोबार हुने भएकोले यहाँ कतिपय एक्सचेन्जले रातको १२ वा २ देखि ३ बजे दैनिक हिसाब गर्छन् र रकम अपुग हुनेलाई खबर गर्छन् । तपाईले रकम थप्न सक्नु भएन भने त्यो कारोबार स्वतः रद्ध हुन्छ ।
दैनिक हिसावअघि नै बजारमा लगानीकर्ताले थप्न पर्ने रकम बढ्दै गयो र ४ प्रतिशतभन्दा बढि देखिएमा त्यो करोबार स्वतः रद्ध हुन्छ र पछि लगानीकर्ताले अपुग रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न ४ प्रतिशतको सीमा राखिएको हो ।
यता, दिर्घकालिन कारोबारमा पहिले तपाईले सम्झौता पत्र खरिद गर्नु हुन्छ । यसको प्रक्रिया पनि बिक्री गर्दा जस्तै खरिद आदेश दिए हुन्छ । तपाईको खरिद सम्पन्न भएमा तपाईले अवधि नसक्दासम्म त्यो सम्झौता पत्र बिक्री गर्नैपर्ने हुन्छ । तपाईले अवधि रहँदा जुनसुकै समयमा त्यसलाई बिक्री गर्न सक्नु हुन्छ । बिक्री गर्दा नाफा भएमा पैसा पाउनु हुन्छ भने नोक्सान भएमा थप्नु पर्छ । तपाईले बिक्री गर्नुभएन भने पनि अवधि समाप्तिपछि त्यो बिक्री भए सरह मानिन्छ र यसअघि भनिए जस्तै नाफा भए रकम पाउनु हुन्छ र घाटा भए रकम थप्नु पर्छ ।
यो बीचमा घाटा हुन लाग्यो र तपाई पैसा थप्नु पर्ने भएमा मार्जिन कल भने आउछ । यदी मूल्य अवधि समाप्त हुनुअघिसम्म बढ्न सक्छ भन्ने लागेमा पैसा थप राखेर पनि कारोबारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
प्रकाशित | २०७४ भाद्र २ प्रकाशित १२:५१
इलाम विमानस्थलमा उडान परीक्षण सफल
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार १२ हजार शाखा अधिकृतको समायोजन
चीनका प्रधानमन्त्री गोप्य रूपमा तिब्बतमा, भने तिब्बत चीनको अविभाज्य भाग
केपी ओलीले गुटबन्दी गरेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा योगेश भट्टराईले आर्कोश पोखे